Mwoyo unoziva zviri kuurwadza (10)
Nzira inoita seyakarurama inogona kukonzera rufu (12)
Munhu asina njere anongotenda mashoko ese ese (15)
Shamwari dzemupfumi dzakawanda (20)
Mwoyo wakadzikama unopa upenyu kumuviri (30)
14 Mukadzi akachenjera anovaka imba yake,+Asi benzi rinoiputsa nemaoko aro. 2 Munhu anofamba mukururama anotya Jehovha,Asi munhu anofamba muunyengeri* anomuzvidza. 3 Kutaura kwekuzvikudza kwebenzi kwakafanana neshamhu iri mumuromo maro,Asi miromo yevakachenjera ichavadzivirira. 4 Kana pasina mombe chidyiro chezvipfuwo chinenge chakachena,Asi simba remikono yemombe rinoita kuti goho riwande. 5 Chapupu chakatendeka hachinyepi,Asi chapupu chenhema chinongotaura zvekunyepa chete.+ 6 Museki anotsvaga uchenjeri asi haahuwani,Asi ruzivo runongouya nyore nyore kumunhu anonzwisisa.+ 7 Tambira kure nebenzi,Nekuti hauzowani ruzivo pamiromo yaro.+ 8 Uchenjeri hunoita kuti munhu ane njere anzwisise nzira dzake,Asi mapenzi anonyengerwa* neupenzi hwawo.+ 9 Mapenzi anotoita zvekutamba nekuva nemhosva,*+Asi vakarurama vane chido chekuyanana. 10 Mwoyo ndiwo unoziva zviri kuurwadza,*Uye hapana mumwe munhu angaziva kufara kwawo. 11 Imba yevakaipa ichaparadzwa,+Asi tende revakarurama richabudirira. 12 Kune nzira inoita seyakarurama kumunhu,+Asi inoguma nerufu.+ 13 Kunyange munhu achiseka, mwoyo wake unogona kunge uchirwadziwa,Uye kufara kunogona kuguma nekushungurudzika. 14 Munhu ane mwoyo wakatsauka achakohwa mubayiro wenzira dzake,+Asi munhu akanaka anokohwa mubayiro wezvaanoita.+ 15 Munhu asina kuchenjera* anongotenda shoko rese rese,Asi munhu ane njere anofungisisa nhanho imwe neimwe.+ 16 Munhu akachenjera anongwarira obva pane zvakaipa,Asi benzi harifungi* uye rinozvivimba. 17 Munhu anokurumidza kutsamwa anoita zveupenzi,+Asi munhu anotanga afunga* anovengwa. 18 Vasina kuchenjera* vachagara nhaka yeupenzi,Asi vane njere vanopfekedzwa korona yeruzivo.+ 19 Vanhu vakashata vachakotamira vakanaka,Uye vanhu vakaipa vachakotama pamagedhi evakarurama. 20 Murombo anovengwa kunyange nevavakidzani vake,+Asi mupfumi ane shamwari zhinji.+ 21 Munhu anoshora muvakidzani wake anenge achitadza,Asi munhu wese anonzwira nyasha vakaderera anofara.+ 22 Vaya vanoronga kuita zvakaipa havazotsauki here? Asi vaya vanofunga kuita zvakanaka vachawana rudo rusingachinji uye kutendeka.+ 23 Kushanda zvakaoma kwese kune zvakunobatsira,Asi kungotaura zvisina basa kunounza urombo.+ 24 Korona yevakachenjera ipfuma yavo;Asi upenzi hwemafuza hunongova upenzi.+ 25 Chapupu chechokwadi chinoponesa vanhu,*Asi chiya chinonyengera chinongotaura zvekunyepa chete. 26 Mukutya Jehovha mune chivimbo chakasimba,+Uye vana vake vachapotera imomo.+ 27 Kutya Jehovha itsime reupenyu,Kunobvisa munhu pamisungo yerufu. 28 Vanhu vakawanda ndivo kukudzwa kwamambo,+Asi mutongi anoparara kana asina vanhu vekutonga. 29 Munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo,+Asi asina mwoyo murefu anoratidza upenzi hwake.+ 30 Mwoyo wakadzikama unopa upenyu* kumuviri,Asi godo rinoodza mapfupa.+ 31 Uya anobiridzira munhu akaderera anoshora Muiti wake,+Asi wese anonzwira murombo tsitsi anomukudza.*+ 32 Munhu akaipa achawisirwa pasi nezvakaipa zvake,Asi munhu akarurama achapotera mukururama kwake.+ 33 Uchenjeri hunogara hwakadzikama mumwoyo memunhu anonzwisisa,+Asi hunofanira kutoita zvekuzvizivisa pakati pemapenzi. 34 Kururama kunokwidziridza rudzi,+Asi chivi chinonyadzisa rudzi. 35 Mambo anofadzwa nemushandi anoshandisa njere,+Asi hasha dzake dziri pamunhu anoita zvinonyadzisa.+
^ Kana kuti “ane nzira dzisina kururama.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “anonyengera vamwe.”
^ Kana kuti “nekugadzirisa pakanganiswa.”
^ Kana kuti “kurwadza kwemweya wawo.”
^ Kana kuti “akapusa.”
^ Kana kuti “rinoviruka nehasha.”
^ Kana kuti “anonyatsofunga.”
^ Kana kuti “Vakapusa.”
^ Kana kuti “utano.”
^ Kureva, Muiti.